China Yemagetsi sando yekuboora zvishoma, kongiri yekuboora zvishoma, SDS, Max, Hex, percussion bit, perforator, drill bits fekitori nevagadziri | Boda
Electric sando chibooreso ikakuruma, kongiri chibooreso ikakuruma, SDS, Max, Hex, percussion ikakuruma, perforator, chibooreso matomu
Electric sando ikakuruma mhando yemagetsi muhombe sando chibooreso nechengetedzo batira yakasungirirwa ne pneumatic sando mashandiro. Iyo inogona kuvhura 6-100 mm maburi pazvinhu zvakaoma senge kongiri, zvidhinha, dombo, nezvimwe, zvine hunyanzvi hwepamusoro.
Kune akawanda marudzi emagetsi sando yekuboora mabheti. Patinochera zvinhu zvakasiyana, tinoshandisa mabhureki akasiyana. Ehezve, mhando dzakasiyana dzezvibhorani matomu akasiyana. Kana isu tichinetseka nezve kutenga zvisirizvo mabiti, isu tinofanirwa kunyatsoongorora iwo maratidziro uye mamodheru emagetsi sando dzemagetsi. Chete nenzira iyi ndipo patinogona kuziva kana isu tichida chibooreso zvishoma. Ngatitarisei pane zvakatemwa uye mamodheru emagetsi sando mabiti?
Rondedzero yemagetsi sando matomu: 6 mm, 8 mm x 110 mm; 8 mm x 160 mm; 8 mm, 10 mm, 12 mm x 10 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm x 450 mm nezvimwe.
Mutumbi mukuru we cemented carbide nyundo yekuboora inogadzirwa nemhando yepamusoro yesimbi simbi, uye iyo yekucheka musoro yakasungwa neacemented carbide. Inogona kushandiswa nemhando dzese dzesando dzemagetsi. Inokodzera kuchera pakongiri, zvidhinha nezvimwe zvakaoma zvekuvakisa. Icho chishandiso chekuchera chine upamhi hwekushandisa uye kugona kwakanyanya mukuvaka uye kuisa indasitiri
Rondedzero yemagetsi sando yekuboora yakaiswa ndeye: 5 * 110mm, 6 * 110mm, 6 * 160mm, 8 * 160mm, 10 * 160mm nezvimwe.
Round mubato uye mativi mubato wemagetsi sando chibooreso
Kureba kuburikidza nemadziro ekuboora ndeye 350mm
Hunhu hwemagetsi sando zvishoma
1. Yakanaka kuvhunduka yekumwa sisitimu: inogona kuita kuti anoshanda abate akasununguka uye kubvisa kuneta. Nzira yekuita izvi ndeye "vibration control system"; rakapfava rabha mubato unoshandiswa kuwedzera kubata kwenyaradzo;
2.Kunyatso kumhanyisa switch switch: kana switch ikabatwa zvishoma, kutenderera kumhanya kuri pasi, izvo zvinogona kubatsira muchina kuti ubudise zvakanaka (semuenzaniso, kudhonza pane yakashata nzvimbo senge mataira, ayo asingakwanise kudzivirira zvishoma kubva kutsvedza, asi zvakare dzivirira kuboora kubva kutsemuka.Yepamusoro inomhanya inogona kushandiswa mune yakajairwa mashandiro kuve nechokwadi chebasa rinoshanda.
3. Yakagadzikana uye yakavimbika chengetedzo batira: inozivikanwawo setoriki inodzikamisa batira, inogona kudzivirira iyo yepamusoro torque yekuita simba inogadzirwa nekunamatira kweiyo drill bit panguva yekushandisa maitiro, iri mhando yekuchengetedza kuchengetedzeka kune vashandisi. Ichi chiitiko zvakare chinodzivirira iyo giya unit uye mota kubva mukumira.
4.Comprehensive mota dziviriro mudziyo: mukushandisa, hazvidziviriki kuti granular zvinhu zvakaoma zvinopinda mumuchina (kunyanya kudhiraira kumusoro pamushini, senge kuchera pamusoro pemadziro). Kana mota isina dziviriro, zviri nyore kutyorwa kana kukwikwidzwa nezvinhu zvakaomarara mukutenderera-kumhanya, zvinozopedzisira zvakonzera kukundikana kwemotokari.
5. Pamberi uye neshure basa: inogona kuita kuti sando iwedzere kushandiswa, uye fomu rayo rekuziva rinonyanya kugadziriswa nekuchinja kana kugadzirisa chinzvimbo chebhabhoni bhurasho. Kazhinji, maturusi makuru emhando anozochinja chinzvimbo chekabhoni bhurashi (chinotenderera bharashi chinobata), icho chine zvakanakira mashandiro akanaka, kumanikidza kudzvanyirira kwemasapota kuchengetedza komutara uye kuwedzera hupenyu hwebasa remota.
6. Hammer chibooreso chinoshanda
Chii chatinofanira kuteerera kana tichishandisa yemagetsi sando zvishoma?
1.Matters anoda kutariswa mukushandisa simbi yemagetsi simbi - simbisa kana magetsi anowanikwa panzvimbo inoenderana neyemagetsi sando zita ndiro. Kunyangwe iyo yekudzivirira inodzivirira yakabatana. Icho chibooreso uye mubati anofananidzwa nekuiswa mushe.
2.Chenjedzo yekushandisa nyundo yemagetsi - kana uchichera madziro, siringi uye pasi, zvinodikanwa kuti uone kana paine tambo dzakavigwa kana pombi. Paunenge uchishanda pakakwirira, nyatsoteerera kuchengetedzeka kwezvinhu uye vanofamba netsoka pazasi, uye isa zviratidzo zvekunyevera pazvinenge zvichidikanwa.
3. Kuchenjerera pakushandisa sando yemagetsi - simbisa kana switch pane sando yadimburwa. Kana switch yemagetsi iripo, chishandiso chemagetsi chinotendeuka kamwe kamwe apo plug yacho inopinzwa musoketi yemagetsi, iyo inogona kukonzera kukuvara kwemunhu. Kana iyo nzvimbo yekushandira iri kure nemagetsi, iyo yekuwedzera tambo ine inokwana kugona uye inokwanisika kuisirwa inofanirwa kushandiswa. Kana iyo yekuwedzera tambo ikapfuura nepasevhisi yekufamba, inokwidziridzwa kana matanho anotorwa ekudzivirira tambo kubva pakupwanywa nekukuvara
BOSENDA Electric Hammer Drill Bit / Concrete Drill Bits / Drill Bits / Electric Drill inogadzirwa ne40Cr simbi uye yekutanga yg8c tungsten alloy. Nesimba kudzora kwepamusoro tembiricha kupisa kurapwa maitiro, chigadzirwa chinonakidzwa neakakwana musanganiswa wekuoma uye kuomarara, uye kwayo pamusoro kurapwa kwakanyatsonaka.
Yepamusoro mhando chiwanikwa zvinhu zvinoshandiswa kugadzira chibooreso zvishoma chinopinza uye kupfeka nemishonga, kuwedzera hupenyu hwebasa nekuvandudza kukanganisa kusagadzikana.
Iyo pasuru inowanzo kuve chena epurasitiki chubhu, uye inogona zvakare kugadziriswa maererano nezvinodiwa nevatengi.
Imwe mhando yezviborera zvinogadzirwa nekabhoni simbi Asi 40Cr chibooreso chine kutaridzika kutaridzika uye hwakareba hupenyu hwebasa nguva dzinoverengeka kupfuura kabhoni simbi seboka rakaboora.
Product chikumbiro: zvinowanzoshandiswa kuchera pamusoro machena, girenayiti, kongiri, simende, zvidhinha uye zvimwe zvinhu.
Mubato une max, SDS, hex uye isiri-yakajairwa tsika.
Tarira: ukobvu hwemabhuru hunofanirwa kuve hunopfuura mamirimita makumi mashanu, uye kusimbisa kunofanira kudzivirirwa kana uchichera mukongiri.
BOSENDA Electric Hammer Drill Bit inopa hukuru hwakakwana. Inogona kusangana nezvinodiwa pane zvese zvinodiwa mu drill bit.
Pashure: Kuvaka chibooreso zvishoma, akawanda-anoshanda chiwanikwa chibooreso, zvedongo tile girazi chibooreso, simbi chibooreso, Overlord chibooreso, machena madziro chibooreso, cemented carbide mugomba saha
Zvadaro: Four paburi uye mana kumucheto kuveza broach ikakuruma, matatu reza mana unopinza muhombe chibooreso, huni chibooreso matomu
Nhanho chibooreso, titanium yakafukidzwa nhanho chibooreso, hexagon ...
Multi dzichipfekeka kongiri chibooreso, zvedongo Tile D ...